DA40A मोबाइल ड्रम स्ट्याकर, ड्रम औषधालय, उल्टो ड्रम - Iliftequip.com
DA श्रृंखला मोबाइल ड्रम स्ट्याकर डिजाइन मा उपन्यास हो, म्याकेनिज्ममा उचित र प्रयोग गर्न सजिलो। यो कारखाना, कार्यशाला, गोदामहरू र तेल डिपोहरूमा ड्रम लोड गर्न, अनलोड गर्ने, ह्यान्डल गर्ने र स्ट्याकिंगका लागि उपयुक्त छ।
हावामा ओभरभर्निंग र १ 180० डिग्रीभन्दा बढी डिग्रीसम्म रहन, विशेष गरी रासायनिक उद्योगका लागि उपयुक्त, खाद्य वर्कशपमा पेस गर्ने वा सामग्री, र ड्रममा कार र स्ट्याक लोड गर्न र उतार्न सक्छ जसले कामको दक्षतामा ठूलो सुधार ल्याउन सक्छ र श्रमिकहरूको श्रमको तीव्रता कम गर्न सक्छ। यो भारी वस्तुहरू लोड गर्न र उतार्न र लिफ्ट गर्नको लागि परिमार्जन गर्न सकिन्छ, र एक नयाँ आदर्श बहु-उद्देश्य ड्रम लोडि and र अनलोडिंग मेशीन हो।
कोटिंग्स, स्याही, चिपकने, र pig, पिगमेन्ट, कीटनाशक, कागज निर्माण, छाला, पेट्रो रसायन, क्याल्सियम कार्बोनेट र अन्य उद्योगहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ;
आई-लिफ्ट DA40 मोबाइल ड्रम स्ट्याकर, उठाउन सजिलो, यातायात र ilt 55 गैलन ड्रम झुकाउनुहोस्।
ड्रमलाई र्याकमा राख्नका लागि उपलब्ध (१5050० मिमी भन्दा कम)
तरल खाली गर्न ड्रम १२० डिग्री झुकाउनुहोस्।
कम्प्याक्ट र भरपर्दो मेकानिकल प्रणाली ड्रम फिक्स गर्नका लागि।
एक नल मार्फत पानीका लागि ओट क्षैतिज स्थिति बचाउन ठाडो स्थितिमा ड्रम लक गर्नुहोस्।
अनलोडिंग हुँदा प्याडलको साथ सजिलै लिफ्ट।
ड्रम स्ट्याकरसँग DA40A, DA40A-1, DA40B छन्
१. सबै तामा रिड्यूसर, एन्टि-रस्ट र एन्टी-लीकेज स्वीकार्नुहोस्।
२. डबल-प row्क्ति श्रृंखला स्टिल तेल ड्रमको यातायात र स्ट्याकिंगका लागि उपयुक्त अडिनु र खिया लाग्न सजिलो छैन।
B. बोल्ड स्टील चेन लिंक लक र फिक्सिंग अपरेशन सरल र सुविधाजनक छ
Arc. आर्क हुप, तेल ड्रम कडा रूपमा समात्नुहोस्, अझ मजबुत
Lar. ठूलो रकर, अधिक श्रम-बचत र अधिक कुशल
The. चकको उचाई समायोज्य छ, र हटाउन योग्य चक विधानसभा दैनिक मर्मतका लागि सुविधाजनक छ। आवश्यकता अनुसार उचाइ समायोजित गर्न सकिन्छ।
Oil. उच्च चुहावट तेल सिलिन्डर तेल चुहावट रोक्न र मर्मत लागत कम गर्न
ड्रम ह्यान्डलिंग, उत्पादनहरू